Golaha wasiirada Soomaaliya oo ka shiray amaanka iyo qaraxii Hotel Central – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho: Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federalka Somaliya, Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ayaa maanta shir guddoomiyay kulankii caadiga ahaa ee Golaha Wasiirada, waxaana looga hadlay xaaladda caafimaad ee dadkii ku wax yeeloobay weerarkii Alshabaab ku qaaden Hotel Central, xaaladda guud amniga dalka iyo qorshaha Xukuumadda ee sanadka 2015/2016.
Golaha Wasiirada, ayaa warbixin ka dhageystay Wasiirka Amniga Qaran Cabdirisaaq Cumar Maxamed, wuxuuna sheegay in guddiga Amnigu ay ku guda jiraan shaqo badan oo ku aadan sidii loosoo gabo gabeyn lahaa baarista la xiriirta dhacdadii Hotel Central ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka Amniga, ayaa tilmaamay in natiijooyinka horu-dhaca ah ay tilmaamayaan qaraxaasi in laga soo abaabulay gudaha Hotelka oo ay aad u maleegtay haweenaydii halkaas isku qarxisay (Luul Axmed) oo muddo ka shaqeynaysay Hotelka.
“Wasaaradda Amnigu waxay diyaarisay qaab siyaasadeed la xiriira sugidda iyo hubinta amniga, qorshahan wuxuu saamayn doonaa hotellada, goobaha ganacsiga iyo meel walba oo laga shakiyo si amniga dalka guud ahaan loo xaqiijiyo. Waxaa baaritaan lagu sameynayaa baabuurta, waxaa ka qayb qaadan doono saddex waaxood oo kamid ah ciidamada amniga, si loo hubiyo wax walba oo laga shakiyo. Baaristan waxay saamayn ku yeelan doontaa cid kasta oo gaadiid hubaysan wadata, waxay hay’adaha sirdoonku dabagal buuxa ku sameynayaan qof kasta oo looga shakiyo in uu ku lug lee yahay kooxaha argagixisada.” Ayuu yiri Wasiirka Amniga gudaha, Cabdirisaaq Cumar Maxamed.
Sidoo kale kulanka Golaha Wasiirada, ayaa warbixin looga dhageystay Wasiirka Caafimaad Marwo Xaawo Xasan Maxamed, waxa ayna sheegtay in Wasaaradda Caafimaadka ay sameysay guddi gurmad deg deg ah oo loogu talla-galay, in ay la tacaalaan dadkii waxyeeladu ka soo gaartay weerarki Hotel Central.
“Wasaradda Caafimaadka waxay maalmahan ka shaqeynaysay in ay tiro koob dhab ah ka keento dadkii ku jiray Isbitaallada dhaawacyada la geeyay, Isbitaal Madiina waxaa la geeyay 27 qof, waxaa ka baxay Isbitalka oo la daaweyay 17 ruux, mid kamid ah waxaa loo wareejiyay Isbital Digfeer, dadkii halkaa la geeyay hal qof ayaa dhintay. Sidoo kale Isbitaalka Digfeer dadka loo qaaday 19 qof ayay ahaayeen 12 qof ayaa ka baxay oo la daaweeyay, 7 qofna waa jiifaan wali, kuwa dalka wax looga qaban waayayna waa 7 qof, waxaana loo qaadi doonaan dalka dibadiisa, gaar ahaan dalalka Sucuudiga iyo Imaaraadka oo gacan nagu siinaya.” Ayay tiri Wasiirka Caafimaadka Marwo Xaawo Xasan.
Golaha, ayaa ka hadlay soo gudbinta qorshaha wasaarad kasta si loo xaqiijiyo hiigsiga 2016, iyadoo la isku raacay in wasaaradda Qorshayntu iyo Iskaashiga Caalamigu ay noqota Wasaaradda xiriirisa dhamaan hay’adaha dowladda gaar ahaan hagista iyo maareynta deeqaha bulshada caalamka, ujeedka laga leeyahayna ay tahay sidii looga hortagi lahaa isbar-bar yaaca, Wasaaraduna ay ugu istaagi lahayd iyadu inay masuuliyadaas qaato.